I-Geofumadas: apha phakathi kwethu-iGeofumadas
NgoJanuwari, 2010 Internet kunye neBlogs, egeomates My
Kule veki, ngaphandle kokulinda umntwana omtsha oza kuba ngumgcini wabantwana bam, ndiye ndanethuba lokudibana nomhlobo wam osuka kwiblogi ondifowunele ngaphambi kokuba ndize kula mazwe wandixelela ukuba ufuna udliwanondlebe ngeenjongo zakhe. Ndandiziva ndonwabile gqitha ukuba emva kweeyure ezimbalwa zendiza ufundela kum kwaye ngezikhathi ezithile uphakamisa oku kufundwa phakathi kwabafundi bakhe eningizimu yelizwekazi; Emva kweenkompo ezimbalwa zekhofi umgaqo-nkqubo waphela kwaye sakwazi ukuthetha ngezifundo zabantu.
Xa imvume yakho ndiya ibonise ihambo yenu ezimnandi, leyo kwandenza ndacinga xa wabaleka emva kwemini ngoxa umva wam izama ukubila kwixesha omkhulu abandayo kuphulukana uneemina enokuba shiya izidlo olugqibeleleyo sikama.
Iinjongo zethu ziyafana
Ikhofi enomnqweno owenziwe nge-donut yasenza sihleka ngobudlelwane bomongameli bethu besitya i-melon kwiTV, kunye naye xa efuna ukulungisa ingxaki yeHonduran ngaphandle kokukwazi ukulungisa iingxaki zabantu bakhe.
Kwaye kukuba, naphi na apho ukhoyo, ngaphandle kokujoyina ikota kml, sineminqweno efanayo. Siyahluka ngeendlela zokuziphatha kuba ezo zinto ziyatshintsha kunye neminyaka kunye ne-delta ye-UTM eyahlulahlula, ngenxa yoko ngekhe sikwazi ukuhambelana phakathi komnqweno wokuba nabantwana ngoku, sikhwaza iinkolelo zethu zonqulo okanye umbono yentlalo ekhohlo.
Kodwa sonke sifuna ukuphucula ngendlela ebalulekileyo, sifuna ukufunda into emitsha imihla ngemihla, ukuthengisa ngaphezulu konyaka, ukufumana umvuzo ongcono, ukujongana neengxaki zobudlelwane bezemisebenzi; sihlupheka ukuxhatshazwa kwengqondo okanye sithambekele ekuchazeni ukonwaba kwethu, ekugqibeleni, sonke sinqwenela ukungabinabungozi kwabo babangela impumelelo yethu.
Kungakhathaliseki ukuba ungaphi, isiqingatha seenjongo zakho siya kunqulwa ngenxa yemigudu yakho, esinye isiqingatha siya kuxhomekeka kwithuba onika abanye ukukunceda ukuba uphucule ... Ndiyathemba njalo.
Le bhulogi ayikho ngenxa yam.
Ekugqibeleni, umbuzo awandibuza wona wawuphindaphindwe njengasekuqaleni, abo babhala kakhulu eGeofumadas. Kule minyaka mibini ndifundile ukuba izihloko kufuneka ziphume AbafundiUkuba kukho into ethile kwimfundo kubalo-manani kukuba ukwazi ukukhathazeka kweendwendwe; ngenxa yesi sizathu, kukuba umxholo weGeofumadas awunanto nje yento endiyithandayo ngokuxutyushwa nento abanye abayifunayo.
Kuthetha ukuba le bhlog ayibangelwa ngumbhali wayo, ukhetho lwam alunasoftware, kodwa ngo-2009 ndaye ndagqiba kwelokuba ndibhale inani lezihloko malunga ne-AutoDesk Civil 3D ukulinganisa inkqubo ephawuliweyo kunye neBentley kunye nemfuno esele ikhona abafundi. Isizathu esinye sokuba kutheni ngo-2010 ndiceba ukumba ngesibindi se- ArcGIS 9.3 kwi-Acer Aspire One.
Ukunciphisa kwethemplate akukwazi ukunqotshwa, kuba ndikhetha ukuhlala kwiCartesians kunokuba ndihambe ngokupheleleyo kum Geofumadas.com; Ukubuyisa, ndiyathemba ukugcina abafundi benothando lomxholo. Kodwa emazantsi ezantsi, ngokuchaseneyo noko abanye abantu bakucingayo, isiqingatha sezinto endithetha ngazo ndizifundile njengoko ndibhala, isenzo esifuna uphando ... ndibhala ngento eqhelekileyo yesiqhelo emsebenzini nento engekhoyo Ndibhala kakhulu, andazi kakhuluokanye akukho nto).
Yaye iphumelele ngeblogi
Izibonelelo zokuba nebhlog yakho zingaphaya kokuqondwa, ezo zinto ziya kugcwalisa ukungalingani kokungoneliseki kwakho kunye nokudlulisa izinto ezinjalo. Kodwa, kwiminyaka emi-5, ukuba ezi fashoni zaziwa njengeeBlogs zinokuba sisihloko esiphelelwe lixesha, ngokungathandabuzekiyo ndiza kuziva ndonelisekile kukwazi iindawo ezintsha, abahlobo abatsha, izihloko ezitsha kunye nokuvula amathuba amatsha abafundi ... kwaye nam. Kodwa oko kukwayixeshana.
Ukugqiba kwam ukubaleka namhlanje, unkosikazi wam wanditsalela umnxeba wathi kubonakala ngathi sele sinomntu ogcina umntwana, ndakhululeka kuba iholide yam iphela ngoMvulo. Emva kokukroba ngalo mbandela ndaziva ndonwabile, ndafowunela abantwana bam abandikhapha imini yonke ndabanika la hug ndingabanikanga yona namhlanje. Ezo zinto ... zingunaphakade.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-ArcMap: Ngenisa idatha ukusuka kwi-Microstation Geographics
Post Next Imephu yefowuni ephathekayoOkulandelayo »
2 Iphendula "iGeofumadas: nantsi phakathi kwethu"
Ndiyabulela uLutaro, kukuvuyisa ukuba ndibe nabafundi bomgangatho wakho.
Hi Geofumed, uyazi? ekuhambeni kwexesha kwiminyaka emibini edlulileyo ngenxa ithuba ndabona le blog phantse fresh ngaphandle (Ndicinga iposi yakho njenge-veki xa kupapashwa) Mna wayilandela kwaye kum Siyavuyiswa ukufunda wena uze ufunde izinto ezinomdla kweli hlabathi leGIS. Nkqu kumnandi kakhulu ukwazi ukuba emva le blog ngumntu ngabantu kakhulu njengoko nayiphi na (ngaphaya nje zobugcisa elihle) kwaye bazi umthamo bokuhlalutya isigwebo osisilumko ukuba ndiyifundile kwezinye post (kwi imeko kwilizwe lakho).
Kulungile kwisishwankathelo, ndiyabulela kwaye ndiyayithanda inqanaba lebhlog yakho kunye nomoya womntu oprintayo kuyo, ndiyavuyisana nawe ngesakhono osibonisileyo ukuze ube nakho ukuhlanganisa imiba enzima kangaka kwiitekisi ezilula, kwaye ekugqibeleni (kunye nesalathiso iposti), jonga ukuba unomnye umhlobo apha eMexico …………………
Impumelelo kulo nyaka eqala !!!